Aza atao hoe An-tapitrisa Matin’ny hanohanana Nandritra Ny Mosary Goavana Tany Shina. Andramo kokoa ny hoe “Fahafatesana Noho Ny Sakafo” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2013 0:02 GMT
Ampangain'ireo Sinoa mpampiasa ny Sina Weibo, tranonkala Sinoa malaza amin'ny fitorahana bolongana bitika, ny Profesora Sinoa iray, ho ninia nanao tsinontsinona ny isa an-tapitrisan'ireo olona maty nandritra ilay mosary goavana nitranga tao amin'ny firenena tany amin'ny fisasahan'ny taonjato farany teo, mba hanomezana vàhana ny antoko Kaominista Sinoa (Chinese Communist Party / CCP).
Ny fiteny nafàna indrindra tamin'ny fitadiavana tao amin'ny Weibo tamin'ny 06 Septambra 2013 dia ny hoe “Fahafatesana noho ny sakafo” (营养性死亡). Hita ao aminà fanehoankevitra iray nosoratan'i Sun Jingxian, profesora avy any amin'ny “Jiangsu Normal University”, manamafy fa hoe honohono ihany ny isa 30 tapitrisa voavinavina ho maty nandritra ny Mosary Goavana tao Shina (1958-1961). Tsy araka izay, ilay profesora dia naminavina ho manodidina ny 2.5 tapitrisa no “fahafatesana noho ny sakafo” hita nandritra ilay “vanim-potoana sarotra naharitra telo taona”.
Satria tsy misy ny fiteny hoe “tsy fahampiana” ao anatin'ny teny Sinoa ilazana ny “fahafatesana noho ny sakafo”, ny dika azo omena azy dia ny hoe fahafatesana nateraky ny, na tsy fahampiana, na fatra diso tafahoatran'ny sakafo. Ny mandray roa tahaka io no nahatezitra mpisera marobe tety anaty aterineto, izy ireo izay mino fa ny ao an-tsain'i Sun dia ny hanafina ny hadisoana ara-tantara nataon'ny antoko kaominista Sinoa (CCP).
Sary manan-tantaran'ireo Fivondronan'ny tantsaha mpamboly nandritra ilay Dingan-dava Mankany Aloha. Ankizy milahatra sakafo. Loharano: Sina Weibo.
Ny ankamaroan'ny vahoaka Sinoa no mino fa ny Dingan-dava Mankany Aloha (1958-1961) no niteraka ilay Mosary Goavana, fanasàna atidoha iray izay nanery ireo tantsaha teny ambanivohitra hanangana fivondronan'ny mpamboly sy handao ny fambolena miahy tena. Tamin'ny fandinihana ny fanisàm-bahoaka tamin'ny 1960-1964, nahatsikaritra ny andianà mpikaroka fa nisy fidinana mivandravandra hatramin'ny 26.4 tapitrisa ny vahoaka Sinoa tao anatin'ny elanelan-taona efatra. Teo anelanelan'ny 1959 sy 1960, tafakatra 10 tapitrisa io fihenàna io tao anatin'ny taona iray monja. Novinavinaina araka izany fa nanodidina ny 30 tapitrisa no isan'ny fahafatesana nandritra ilay Mosary Goavana.
Nandany telo taona i Sun nandalinany [zh] ilay fanisàm-bahoaka sy nanamafisany fa vokatry ny hadisoana teo amin'ny fanisàna ireo vinavina naroso teo aloha, vokatry ny fifindrà-monin'ireo avy any ambanivohitra nankany an-tanan-dehibe. Ny vinavinany manokana dia manodidina ny 2.5 tapitrisa ireo “fahafatesana noho ny sakafo”.
Kanefa, noho ny antoko CCP nanome toky, tsy ela akory izay, fa hanamafy ny fanarahamaso ideolojikany ary ny ampahany amin'izany fanentanana izany dia hiadiana amin'ireo “honohono”, ireo fiampangan'i Sun hoe “honohono” ireo tsoakevitra avy amin'ireo fikarohana teo aloha dia tena misy fifandrohizany mafy amin'ny ara-politika.
Maro no miampanga azy tamin'ny nampiasàny ny fiteny hoe “fahafatesana noho ny sakafo” ho toy ny fialàna bàla mahatezitra nikendreny ny hanaronana ireo hadisoan'ny CCP. “BHLi book store” (@BHLi循证书馆) dia nanandrana nikaroka [zh] teny Anglisy iray mitovy hevitra amin'io no sady nahatsikaritra fa maka dika iray mifanohitra amin'izany ho ohatra izy io:
Sahala amin'ilay teny Anglisy “fahafatesana noho ny sakafo” saingy ny dikany dia hoe “tsy nahalala voky” — Efa ela no nahafantarantsika fa ny “hot dog” dia fandrika iray feno tavy mitondra amin'ny fahafatesana noho ny sakafo, feno sodium sy singa maro natao ho fitehirizana azy.
“Owl's net” (@猫头鹰的巢穴) dia nihomehy [zh] an'ilay teny Sinoa mamitaka :
Izay izany. Maty tsy nahalala voky ry zareo!
Betsaka no nino fa ny nisafidianana ireo teny roa irao dia finiavana hanarona ilay loza harin'olombelona. Ohatra, i “Sunny breeze” (@旭日和风) nitrerona ny hoe [zh]:
Amin'ny fampiasàna ny fiteny hoe “fahafatesana noho ny sakafo” ho entina manondro ireo fahafatesana noho ny mosary harin'olombelona, ny namoronan'ny profesora Sun ilay fiteny dia hamaritra mazava tsara tsy misy diso ny andry ijoroan'ny tsy fahalalàna henatra. Mbola ratsy lavitra noho ireo jiolahy mpanao heloka bevava ny manampahaizana tsy mitsinjo ny maha-olona sy fo vato.
“Who knows Yu's happiness” (Iza no mahalàla ny hasambaran'i Yu) (@安知渝之乐) koa dia nahita [zh] ilay fiteny ho feno fitaka:
Fahafatesana noho ny sakafo — efa tena lany henatra mihitsy ve? Olona firy no maty tao anatin'ny telo taona? Iniana saronana ny tantara. Maninona no tsy antsoina koa hoe revolisiona ara-kolontsaina ny fetim-pirenena?
Ny antony tena mahatezitra mafy ireo mpisera ety anaty aterineto amin'ilay fiteny dia satria mitàna toerana be eo amin'ny politika Sinoa ny fialàna bàla / familivilian-dresaka. “Qinghua Qinpang” (@清华秦鹏) dia nanangana [zh] lisitra iray misy ireo fiteny Sinoa fialàna bàla:
Ireo fiteny mampiavaka ny Sinoa: ny matin-kanoanana dia antsoina hoe “fahafatesana noho ny sakafo”, ny mpamadika lasa nandositra dia antsoina hoe “fahabangàn-toerana noho ny fanarahamaso ny fahasalamana” [miresaka ny fandosiran'i Wang Lijun tany amin'ny solontena maharitr'i Etazonia], ny fitontonganana dia antsoina hoe “firoboroboana miiba”, ny tsy fisian'ny asa antsoina hoe “fiandrasana asa”, tsy fantatra izay lazaina amin'ny hoe “fitrandrahana ahitan-tombony”, ny mpanompo antsoina hoe “mpitarika”, ny mpanao heloka bevava antsoina hoe “farany havia”…
Chen Yani nanolotra [zh] fiteny iray fialàna bàla tsara kokoa :
Maninona moa no tsy antsoina fotsiny hoe “renoka mandrakizay”
@afa2011 nanome [zh] tolokevitra iray hafa :
“Antso avy amin'i devoly” mbola tsara lavitra noho ny [fahafatesana noho ny sakafo]!
“Eating grapes peel” (mihinana faikam-boaloboka) (@吃葡萄皮不吐葡萄葡葡萄) nanipika [zh] fa hanaisotra ireo ahiahy ny famoahana ireo antontan-taratasy manan-tantara atao ho an'ny daholobe :
Nanakombom-bava ireo manam-pahefana mikasika io ampaham-potoana teo amin'ny tantara io. Sokafy daholo ny antontan-taratasy rehetra dia ho voasakanareo ny honohono.
“Really grasping a whole bunch” (@当真一把抓) nampita ny hoe [zh]:
Tsy takatro hoe inona no ezahan'ingahy profesora hafenina. Ny matin'ny hanoanana dia matin'ny hanoanana, fa maninona no soloina hoe “fahafatesana noho ny sakafo”? Telo taona nikarohana ve dia fiteny foromporonina tahaka izany no mba vokatra. Lazainao fa latsaky ny 2.5 tapitrisa ny isan'ny maty, raha izany firy no tena marina e? Azafady, ataovy tena mitombina. Ary azafady, omeo anarana izahay. Ny sasany miteny 30 tapitrisa, azafady koa, mba avoahy ny anaran'ireo maty.
Tahaka ireo Sinoa maro namoy havana nandritra ilay Mosary Goavana, naniry [zh] ny hamoahana ny marina koa i “Meteor 74″ :
Tena fatratra ingahy profesora amin'ny famoronana fomba fiteny. Tsy fantatro na firy no maty, saingy havana marobe no matin'ny “fahafatesana noho ny sakafo”. Ny raibe sy renibeko avy amin'ny ray sy reniko (4) ary ny dadatoako. Mbola ankizy ny ray aman-dreniko, saingy ny reniko dia mahatsiaro foana hatramin'izao ny tsy maintsy nilerany vovon-tany mba hamenoany ny vavoniny. Tantsaha ny ankamaroan'ireo namoy ny ainy..